Previous Article ASCSDA Ekwe Nkwà Ikesàkwùrù Ọtụtụ Ime Obodo Ego Ọrụ n'Izuụka Ọzọ
Next Article Ụbọchị Mbụ nke Ọnwa Me: Ụbọchị Ndị Ọrụ
Akpa nri dị narị abụọ bụ nke ha bunyere ndị ekpenta ahụ ebe narị atọ ka ha kesakwara na Dakwa, nọ n'akụkụ Niger Steeti. E nwere ihe karịrị mmadụ narị ise bi n'obodo ndị ekpenta ahụ.
Onyeisi Qatar Charity, Hamdi Elsayed, kwuru na akpa nri puku atọ bụ nke ha kesagoro na Naijiria, tinyere na otu akpa nri na-ada naira puku iri abụọ. O kwuru na ọlụ enyemaka nke otu ahụ akwụsịghị n'oge ebumọnụ a.
O kwuru, "Anyị nụrụ arịrịọ nke ndị mmadụ bụ ndị nọ na mkpa : ya mere anyị jiri bịa k'anyị lelee ọnọdụ ha. Anyị nọ n'ọnwa ibu ọnụ mana anyị kpebiri Ikeda nri nye ha. Anyị ekesala akpa nri dị otu puku na Sokoto, na Kano, anyị kesara narị asaa. Ebe a, anyị na-enye akpa nri narị abụọ maka ndịbi n'obodo a na narị atọ maka ndị bi n'akụkụ Naija Steeti.
"Anyị ga na aga n'ihu n'amụma na Yola n'izuụka na-abịa. Ihe dị na akpa ọ bụla bụ akpa osikapa dị kilogramme iri abụọ na asaa, agwa, spaghetti, mmanụ nri na tomato. Otu n'ime ha ka ọnụ ya bụ naira puku iri abụọ.
Emmanuel Menegbe, onye nnọchiteanya Onyeisi NOA, Garba Abari, kwuru na ụlọọrụ ahụ wetere enyemaka Mala ndị ahụ chọrọ enyemaka.
"Anyị nyere ozi zuru okè na nkwado pụrụ iche iji were hụ na ha ruru ndị mmadụ. Anyị ahụla nkesa ha na Naijiria, ya mere Naijiria ji ekele ha.